प्रहरीलाई ३ लाख घुस दिन आउँदा आफैं पक्राउ !
Home/ समाचार/प्रहरीलाई ३ लाख घुस दिन आउँदा आफैं पक्राउ !
२ वैशाख, काठमाडौं । राजधानी न्यू इयर इभमा रमिरहेका बेला महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुका प्रमुख सुधीरराज शाही भने एउटा अपरेसनमा खटिएका थिए । उनलाई अवैध सामान तस्करी सम्बन्धी सूचना आएको थियो, जसलाई फलो गर्दै उनी सडकमा थिए ।
डीएसपी शाहीका अनुसार गाडीमा अनुमानित ५० लाख ६८ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको लत्ताकपडा र कुर्ता सुरुवाल थियो ।
गाएक पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट गितबारे ओलिले मुख खोले ( पूरा हेरि शेयर गरौ)
बस दुर्घटना, ४५ जना तिर्थयात्रुको मृत्यु…
पुतलीबजार नगरपालिकाकी मेयरले फेवातालमा हामफालिन